बाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज बाबु-आमा-छोराको उडान त्यो उडान ! « गोर्खाली खबर डटकम
२०७८ असोज ६ गते बुधवार
हङकङसँग गोलरहित बराबरी खेलेपछि नेपालको एसियन कप छनोट यात्रा समाप्त
टिकटक स्टार सरोज र बिनाको अभिनय रहेको कोकाकोला फिगर १० लाख दर्शकले हेरे (भिडियो)
सरकारको एउटै निर्णयले कुन-कुन राजदूत फिर्ता हुँदैछन् ?
काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड् घट्यो तर तीन जनामा अर्कै रोगको डरलाग्दो संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मी चिन्तित
उपप्रमुख कविता विष्टको वार्षिक मोबाइल खर्च ७२ हजार !
विपन्न परिवारलाई जिविकोपार्जनको लागि बाख्रा र बङ्गुर बितरण
यस्तो भयो अन्तिम दिन भद्रकालीमा धर्ती माता र धामी युवती बीचको कडा टक्कर हेर्नुहोस
बर्लिन म्याराथनमा जान लागेका धावक पार्कीको यसरी भयो विदाई
के नेहा कक्कड गर्भवती छन् ? खोलिन् वास्तविकताको पर्दा
बाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज बाबु-आमा-छोराको उडान त्यो उडान !
२०७७ कार्तिक ८ गते शनिवार प्रकाशित
कोठाका भित्ताभरि दर्जन तस्बिर छन् । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सका सुरुवाती दिनदेखिकै जहाजका तस्बिरहरूले उनको कार्यकक्षको शोभा बढाएको छ ।
तस्बिरमा भएकामध्ये कतिपय जहाज अहिले ‘फेज आउट’ भइसकेका छन्, कति चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलमा ग्राउन्डेड अवस्थामा ‘घाम तापिरहेका’ छन् । उनको बाल्यकाल तिनै जहाज उडाउने पाइलट बन्ने सपनाका साथ बित्यो । जबकी अभिभावक चाहन्थे उनी डक्टर बनुन् ।
अभिभावकको इच्छा विपरित पाइलटका रूपमा उनले जहाज उडाउन थालेको पनि १२ वर्ष बितिसकेको छ । उनी अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको पाइलट हुन् । यति मात्र होइन अपरेसन म्यानेजरका रूपमा निगमको नेतृत्व तहको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै छन् । उनी हुन् दीपु जुहार्चन ।
सुन्धारास्थित नेपाल वायुसेवा निगमको चौथो तल्लामा रहेको उनको कार्यालयका भित्तामा सजिएका जहाजका फोटोबारे उनले भने, ‘ यो कोठामा पुरै हिस्ट्री छ’ ।
जहाजको ‘हिस्ट्री’ उनको कार्यकक्षका तस्बिरमा छँदैछ । तर निगमसँगै उनको परिवारको ‘हिस्ट्री’ पनि जोडिन्छ । दीपुको परिवार निगमको सुरुआती दिनसँगै यो क्षेत्रमा जोडिन पुगेका हुन् ।
बा र आमापछि अब दीपुले निगममा काम गर्न थालेको पनि जोड्ने हो भने आधा शताब्दी कट्छ । ६१ वर्ष पुगेको निगममा जुहार्चन परिवारको संलग्नता कूल मिलाएर ५६ वर्ष पुगिसक्यो ।
दीपुका बुबा क्याप्टेन यामप्रसाद जुहार्चनको २४ बर्ष, आमा सुमिली जुहार्चनको २० वर्ष र दीपुको १२ वर्ष गरी जुहार्चन परिवारले कूल ५६ वर्ष निगममार्फत् ‘राष्ट्रसेवा’ गरेको छ । तीनमध्ये बाबु यामप्रसाद र दीपु निगमका जहाज उडाउने क्याप्टेन हुन् भने आमा सुमिली एयर होस्टेस् ।
मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमबाट २ घण्टाको पैदल दुरीमा पर्छ एउटा सुन्दर बस्ती मार्फा । त्यहाँबाट राजधानी पुगेर पढ्ने पहिलो व्यक्ति थिए, यामप्रसाद जुहार्चन । सिद्धार्थ वनस्थलीबाट एसएलसी गरेपछि यमप्रसाद पाइलट तालिमका लागि अमेरिका गए ।
बाबुले पाइलट बन्ने बाटो रोज्नु पछाडिको कारणबारे दीपु अनभिज्ञ छन् । अहिले हवाई र सडकमार्गले जोडिए पनि त्यतिबेला पोखराबाट म्याग्दीको बेनी हुँदै ३–४ दिन हिँडेर मार्फा पुग्नुपथ्र्ये। त्यसैले पनि हवाइ यात्राबाट यो दुरी छोट्याउने बुवाको रहर होला जस्तो लाग्छ दीपुलाई ।
आमा सुमिली भने धरानकी हुन् । लामो समयदेखि हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कार्यरत उनी पनि पछि एयर होस्टेस भएर नेपाल वायुसेवा निगममा प्रवेश गरिन् । अर्थात यामप्रसाद निगममा पाइलट भए, सुमिली एयर होस्टेस भइन् ।
कहिले यामप्रसादले उडाएको जहाजमा सुमिली एयर होस्टेस हुन्थिन्, कहिले सुमिलीको ड्युटी परेको जहाज उडाउने पालो यामप्रसादको पर्थ्याे । मन न हो, एउटै संस्था (निगम) र उडानमा हुने लगातारको भेटले दुवैबीच प्रेम अङ्कुरायो । उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिए ।
यामप्रसाद पाइलट हुँदा दीपु पोखरास्थित गण्डकी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढ्थे । आमाबाबु दुबैको व्यस्तताका कारण उनलाई होस्टेल राखिएको थियो । स्कुले जीवनमा भए पनि रेडियो र टेलिभिजनमा उनको मोह धेरै नै थियो ।
कहिलेकाहीँ विमान दुर्घटनाका समाचार आउँथे र दीपु डराउँथे । आफ्ना बाबु–आमा त्यो जहाजमा रहेनछन् भन्ने जानकारी पाएपछि उनी ढुक्क बन्थे।
बाहिरबाट हेर्नेलाई लाग्ला, बाबु–आमा दुवै उड्ययन क्षेत्रमा भएपछि बालबच्चा बेलाबेला घुम्न पाइरहन्छन् । तर यामप्रसाद र सुमिली यति व्यस्त थिए कि,दीपुले परिवारसँग खासै घुम्न पाएनन् ।
यद्यपी,गर्मी र दशैँको विदामा भने उनी घुम्न जान्थे । काठमाडौँ–पोखराको उडान परेको र बिदा पनि भएका बेला यामप्रसाद दीपुलाई काठमाडौँ लिएर आउँथे । गर्मीको बिदाभरि दीपु काठमाडौँमा रहन्थे । अनि, दशैँ बिदाका बेला बुबाले गर्ने पोखरा–जोमसोम उडानमार्फत् मार्फा फर्कन्थे ।
यिनै हुन् जसले कान र नाकमा लगएको सुनको लोभले आफ्नै हजुरआमालाई मा’रे त्यसपछि…..
ऋचाले जुराइन छोराको यस्तो नाम , लेखिन यस्तो स्टाटस
विवाहको ३ वर्षपछि आमा बन्दै अनुष्का, भन्छिन- ‘जिन्दगी निमार्ण गर्नु भन्दा वास्तविक खुसी अरु केही हुँदैन’
पर्साका उद्योगी व्यवसायी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश, अध्यक्षद्वारा स्वागत
प्रदेश २ मा थप १३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ब्यारेक सिल
अमेरिकीन बच्चा’ जन्मिएपछी परिवारलाई लाग्यो शंका, सत्य थाहा पाउदा उडायो होश !
जति बिजी भएपनि कृपया केहि मिनेट समय दिएर पढ्नुहोला,यति दु,खदाइ अबस्थामा कसको के लाग्छ र ?
संखुवासभा प्रकरणमा नयाँ मोड, अर्का ब्याक्ति पनि पक्राउ परे
फेरी श्रीमानसँग रोमान्टिक मुद्रामा प्रियंका
जंगलमा टोली बोलाइयो, जाँच गर्दा सुरक्षाकर्मी लाजले भुतुक्कै
टिकटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा खसेर युवती बेपत्ता, आठ दिनपछि भेटियो बेपत्ता बालिकाको शव